Sandals® Resorts mankalaza 40 taona amin'ny famadihana ny famantaranandro
Home » Lahatsoratra farany farany » Hotels & Resorts » Sandals® Resorts mankalaza 40 taona amin'ny famadihana ny famantaranandro
Antigua & Barbuda Breaking News • Vaovao Mafana Bahamas • Vaovao Mafana Barbados • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Karaiba • culinary • Kolontsaina • Vaovao Mafana Curacao • Entertainment • Grenada Breaking News • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao lafo vidy • Vaovao • Resorts • Tantaram-pitiavana tantaram-pitiavana tantaram-pitiavana • Vaovao Mafana Saint Lucia • Tourism • Fifanarahana Travel | Torohevitra momba ny dia • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Sandal tsingerintaona faha-40
Sandals Resorts dia manohy ny fankalazana ny faha-40 taonany amin'ny fivarotana manokana mandritra ny 40 andro amin'ny Sandals Resorts voafantina ao anatin'izany ny fananan'ny marika, Sandals Montego Bay. Ny mpivady mamandrika fijanonana fito alina na mihoatra ho an'ny dia mandeha isaky ny 31 Jolay sy 2 Oktobra 2022, dia hamaha ny tahan'ny efitrano manokana $ 200 isan'olona, ​​isaky ny alina any amin'ireo toeram-pandraisana fandraisam-bahiny.
Tahaka ny fiverenana amin'ny taona 80 satria ny Sandals Resorts dia mankalaza 4 taona lasa ao amin'ny indostria.
Ity tahan'ny fankalazana manokana ity dia hitranga manerana ny Sandals Resorts rehetra, manomboka any Jamaika ka hatrany Bahamas, Saint Lucia, ary Curacao, sy maro hafa.
Hisy fety anaty rano misy aingam-panahy 1981, cocktaoty vita tanana, tsipika fitafiana fiotazam-boaloboka, ary menu fisotroan-dronono an-tsaina indray.
"Ity varotra miavaka ity dia hanana mpiara-miombon'antoka mpanolotsaina momba ny dia ary ireo vahiny Sandals Loyalty tamu izay mieritreritra ny faha-80 'ndray," hoy i Gary Sadler, filoha lefitry ny Sales & Industrial Relations for Unique Vacations Inc., mpiara-miasa amin'ny solontenan'ny Sandals Resorts manerantany. Iraisam-pirenena.
Ny fivarotana Sandals Resorts mandritra ny 40 andro dia misokatra ho an'ny famandrihana mandritra ny efapolo andro hatramin'ny 23 Novambra 2021, ary azo alaina amin'ny Sandals Resorts mpandray anjara, ao anatin'izany ny Sandals Montego Bay sy Sandals Ochi Beach Resort any Jamaika ary Sandals Halcyon Beach Resort any St. Lucia.
Kapa 40th Ny fankalazana tsingerintaona dia hatao manerana ny Sandals Resorts rehetra. Ny mpitsidika dia afaka mamily ny asany ary miaina fahafinaretana nostalgia amin'ny fety dobo mitaingina '81, tsipika fitafiana vaovao, sary milomano fisakafoanana vaovao, cocktail vaovao vita tanana ary maro hafa. Ny vahiny dia afaka miditra ao amin'ny Sandals Foundation ary manampy manatsara ny fiarahamonina Karaiba eo an-toerana amin'ny alàlan'ny Initiative 40 ho an'ny 40 vaovao izay hitondra tetikasa 40 fanampiny ho an'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana.
Averina amin'ny toerana nanombohany izany rehetra izany Sandal Montego Bay, ny vahiny dia afaka miaina ny sasany amin'ireo endrika mampiavaka azy indrindra amin'ny marika Swim-Up Suites, bara fihoarana rano, trano fiangonana mariazy mihoatra ny rano sy maro hafa.
Ny mpivady misafidy ny hiala sasatra any Sandals Ochi, manamorona ny morontsiraka avaratr'i Jamaika, dia afaka mankafy sarany maitso maimaimpoana ary mifindra any amin'ny Sandals Golf and Country Club miaraka amin'ny safidy fisakafoanana Global-16 Global Gourmet ™ 5 samy hafa. Vahiny ao amin'ny Sandals Halcyon Beach Resort afaka milentika amin'ny fialan-tsasatra tanteraka ao St. Lucia ary mitsingevana avy ao amin'ny efitranony mankamin'ny fisotroana fisotro misy rano fisotro madio. Na iza na iza amin'ny toeram-pivahinianana misafidy ny hamandrika ny "40th Efitrano fitsingerenan'ny tsingerintaona ”miaraka, dia ho ampahany amin'ny fankalazana ny fitiavana sy fahatokisana 40 taona izy ireo.
Misy fepetra sy famerana hafa. Hamandrika ny 40 tsy miankinath Fivarotana tsingerintaona ao amin'ny Sandals Resorts voafantina, tsidiho azafady kapa.com. Raha te hahalala bebe kokoa momba ny fomba fankalazan'ny Sandals Resorts ny 40th Tsingerintaona, ataovy izay hahazoana antoka fa hitsidika kapany.com/celebrating-40-taona.